Izinkulungwane zabantu baseRussia zithuthelekela njalo ehlobo kuya eningizimu, kuya ogwini ithenda Black Sea. Awukwazi kuphela uphumule, kodwa futhi ukwelapha izifo eziningi. Ngokungangabazeki, yokuthi kumnandi ukuba phakathi best spa zokungcebeleka umhlaba wonke neyaziwayo Anapa. Taman udaka izintabamlilo eliqukethe eyigugu kakhulu ukubunjwa ephulukisa udaka, ethandwa kakhulu. Vakashela wabo ngisho nalabo abangenalo izinkinga zezempilo sobala, ngoba, ngaphezu Umbuso indawo, Ziyathakazelisa nokuhlanzeka kwangaphandle nokuziphatha kwabo okungavamile.
Idolobha lesimanje lase-Anapa itholakala engxenyeni esentshonalanga ye Krasnodar Territory. Endaweni sihamba umngcele esinikelweko phakathi Peninsula Taman Omkhulu eCaucasus. Ngakho-ke, isimo lapha wukuthi izigodi izimbali futhi emathafeni oluhlaza esikhundleni siluhlaza amahlathi coniferous, yetintsaba nezizalo zemifula kuthiwa okufakwe lapha nge amanzi kolwandle. It kwenza lo mlando ube charm ekhethekile endaweni ngezinye izikhathi ezolile futhi emnene, ngezinye izikhathi ngokhahlo futhi ezisongela oLwandle Olumnyama. Anapa nje ku ngasogwini lwalo. Kusuka lapha kuya edolobheni elidume kancane kuka 51 km Temryuk endleleni (kukhona amabhasi njalo) ukuze Golubitskaya emzaneni - 57 amakhilomitha (mayelana hambo lwamahora) ukuze Krasnodar - 165 km, ukuze Novorossiysk - 53, Gelendzhik - 89 Krymsk - 69 km.
Uma uya ukuvakashela intabamlilo odakeni in Anapa, noma umane nje ukhombe ngophakathi lokhu yokungcebeleka enhle, ukuthola lapha kulula. Sebenzisa kungenzeka emhlabeni, emoyeni noma ulwandle ezokuthutha. 15 km ukusuka edolobheni futhi 5 km kusuka Vityazevo isiphetho kuyinto sezindiza eponymous, nesebenzela izindiza eziya Anapa kusukela ezifundeni eziningi zaseRussia. Edolobheni lapho inkonzo amabhasi kanye namatekisi №113. Ebusika, inani walker sehliselwe 3 ngelanga. Umuzi ine a imbobo ukhululekile kakhulu yesimanje, kusukela lapho ungakwazi ukuhamba phezu kwamanzi ngo Sochi, Yalta, Kerch, Feodosia futhi Novorossisk. Futhi, imikhumbi amancane yezikebhe wenze elithakazelisayo uhambo uhambo. Emgwaqweni Krasnoarmeyskaya 11 Anapa Bus Station. amasevisi Bus ezisebenza e Krasnodar, Rostov, Temryuk, Novorossiysk, Kislovodsk, Armavir, Derbent, Sochi, laseStavropol, futhi kwamanye amadolobha resort.
A uhambo kancane ukuze esedlule
Uphi manje yonke inkazimulo yayo lenzelwa Anapa, settlement yokuqala yasungulwa eside ngaphambi kokuzalwa kukaKristu. Lalibizwa ngokuthi Sindika. Uma la mazwe ezazisemizini Bosporus isimo, leli dolobhana laqanjwa ngokuthi Gorgippia. Waba isikhungo esiyinhloko kwamasiko kanye commercial ogwini Black Sea, kwaqhubeka iminyaka engaphezu kwengu-700, kuze ku-240, wayengesilo namaqaba ubhujiswe. Zonke hambo e Anapa ngokuqinisekile ihlanganisa Ukuvakashela umzila komnikazi igodi Gorgippia etholakala maphakathi nedolobha. Lapha ungakwazi ukubona emigwaqweni itshe-ekhonkiwe, esisekhona izinsalela izakhiwo kanye izakhiwo, sarcophagi yabakhulu nokunye ethakazelisa kakhulu.
Ekhulwini XIV, la mazwe lapho yayiyikoloni we Genoese Mapa. Phakathi nenkathi efanayo, idolobha wazama ukubhubhisa Tamerlane, kodwa wayekwazi kuphela ukudlala Prank emaphethelweni Anapa castle. Ekhulwini xv uthwebule kafushane kwathi ngesikhathi Keduk Ahmed Pasha, induna ngokuvukela uMbuso WaseTurkey. Ekhulwini XVII e Anapa travel kwaba Umbhali odumile kusukela Turkey, Evliya Çelebi, futhi ekupheleni XVIII leminyaka lakhiwa khona inqaba Turkish. It sekuqala izimpi phakathi-Turks and Russian, kwaze kwaba yilapho ekugcineni, ngo-1829, Anapa wagcina lebhalwe Russia. Ngemva kwamashumi eminyaka ngemva kwalokho lapho waqala ukuthuthukisa ibhizinisi resort, zisekhona nanamuhla. Thinta yothuthuva ngokungenakulinganiswa neyinkimbinkimbi ngokungaphezulu komuzi kungenziwa wabheka Anapa ezikhangayo, izithombe kanye nencazelo zazo kukhonjisiwe ngezansi.
Le ntaba-mlilo edume kakhulu
Ngaphezu esiqiwini Gorgippia, kukhona endaweni eyodwa okuyinto idume Anapa. Shugo intabamlilo - ukwakheka esiyingqayizivele Geological, okuyiwona izinkulungwane zabantu ukuza resort. Nokho, itholakala ku-lo muzi ngo-43 km, kodwa efinyeleleka kalula ngemoto siqu, ngeteksi noma kwi bhasi. Ngaphambi kokuvakashela le ntaba-mlilo kwaba khulula, manje kubiza imali (ngentengo fixed ngokungena alikho). Ubukhulu lokhu, olubilayo njalo futhi "amathe" udaka yemvelo "umelaphi" asebenzayo iyamangalisa. I ububanzi wentaba yayo - okuningi njengoba 450 metres, futhi phansi isitsha cishe 6 amamitha ngezansi onqenqemeni. Shugo udaka nenzuzo kakhulu isikhumba, amathambo, amalunga impilo jikelele, kodwa kudingeka shí nge umshwalense, njengoba ovele ngangokunokwenzeka (ngokuvumelana tour iziqondiso) bagxuma enekhanda ngokufana nomtwana ikhilomitha. Zithanda noma zingathandi, kodwa yemvelo udaka zokugeza phansi lapho, futhi abantu uncamela babambane ngezandla sonke isikhathi amahhanisi oluvundlile.
Sekuyisikhathi eside Taman kwaba idume udaka yayo mlilo. Ziyakwazi lapha mayelana Shugo 30. Ngaphezu kwalokho, Hephaestus ethandwa kakhulu - mlilo udaka elise Temryuk. Kusukela Anapa ukuza lapha okungenani ihora. Hephaestus - umphumela ofanayo, kodwa hhayi matasatasa Shugo. It ikhona Rotten Hill. Akukho inkomishi eyodwa. Kuzo zonke ndawo has a asemigodini sebuningini diameters ezahlukene. Kukhona omkhulu, lapho ungakwazi ukubhukuda, futhi kukhona impela imvuthuluka, okuyinto khulula ngaphandle umunwe kancane.
Mud Vulcan amaminerali eziningi ewusizo kuhlanganise iodo, bromo, boron, selenium. Ukuze kube lula, ukwehla emgodini efakwe izitebhisi. Geza emva inqubo kungenzeka echibini eliseduze. Lokhu kusiza udaka izintaba-mlilo nezinye izifo zesikhumba, amalunga, isimiso sezinzwa, pheshana emathunjini, isibindi, emaphashini. zokugeza ezinjalo contraindicated zonke izinhlobo izifo sibi, umdlavuza, isifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme, isifo sokuwa, esifubeni somoya nezinye izifo eziningana.
Kukhona eduze Anapa enye indawo kuwufanele ngokuvakashela. It Tizdar, wabaphakamisa ngumuntu intabamlilo odakeni. Ngo Anapa lapho ungathenga zivakashele noma ukuya Siltings ohlangothini, kanye Inkomba "Ukudoba" unikezele endleleni eholela nje endaweni efanele. Ukuvakashela intabamlilo ikhokhelwa, kodwa kukhona, ngaphezu izinqubo zokwelapha, kungaba nje emangalisayo ukuze siphumuze ingqondo, ukukhwela isitimela kuhle encane, iya e-zoo, ahlale endaweni cafe, ujabulele pancake kubhakwa endlini Pancake. Ngemva thini okugeza ngokudlulisa ke uya olwandle. Ogwini lolwandle olukhulu ifakwe amakhowe, umthunzi elangeni. Eduze Gazebo ukhululekile abadala kanye izingane - okuningi ezikhangayo.
Zonke ezikhangayo Anapa: isithombe kanye nencazelo
Omunye izinto yesiteleka kakhulu Anapa Dolphinarium itholakala endaweni evulekile enhle ichibi reserve Big Utrish. Dolphins baphile lapha ukunikeza intshumayelo imvelo, okuyinto ikakhulukazi ezithakazelisayo. Ungabona bottlenose amahlengethwa, imikhomo Beluga, ulwandle izingonyama zamanzi ezinoboya. Ukungena Insimu Imali Reserve. Ukulandela isethulo ungaqhubeka beseyama omunye emabhishi eziningi, phakathi lapho kukhona ezimbalwa nge kulungiselelwa emnene of amanzi, nabanye amabhishi enamadwala kanye sihlabathi egijima enqunu. Enye inqolobane Utrish idume yayo hlathi elingavamile relict ephistakhiyo izihlahla nezomjunipha. Ngeshwa, ekuphathweni lesifunda akanandaba ekulondolozeni lolu ubuhle, sisivumele ubhubhise futhi ukwakha ezihlukahlukene izindawo commercial endaweni. Enye into ethandwa kakhulu Anapa - lighthouse, ezinde eduze nogu enamadwala. Eceleni kwakhe, lendawo nezivakashi abathanda ukuba uvumelane usuku ukujabulela ubuhle indawo okungavamile.
Ngokusho Izibuyekezo eziningi, umzimba omkhulu uphulukisa iyiphi intabamlilo odakeni. Ngo Anapa ukuphulukisa umphefumulo, kukhona ethempelini ukusebenza odumile St Onufriya Velikogo. Ngo imifanekiso yena uchazwa ngaphandle izingubo. isiqeshana of leaf emhlabathini grey ngakho nesilevu kuphela lokusibekela ubunqunu bakhe. Lokhu kukhomba ngokuphelele renunciation Onuphry kuzo zonke izimpahla yasemhlabeni, okuyiwona athatha umhlalaphansi ebholeni eminyakeni 60 ogwadule lwaseGibhithe we Thebaid. Ngokusho yetinsita ulapho noNkulunkulu otmolit zonke wangcwatshwa Akeldama. Manje, zonke esontweni emathuneni ngayingcwelisa yokudumisa usanta. Ithempeli igama layo ngo Anapa lakhiwa 1837. Kwenzeka isimanga ukuthi kwakuwusuku lomkhosi St. Onuphrius, ngisho Petra Afonskogo amasosha Russian iphinde ithunjwe emzini abaseTurkey. A asemrarweni usephendukele ngokusebenzisa St.Onufriy ethempelini. ivaliwe zayo, ubhujiswe. Manje-ke ibuyiselwe futhi ivulekile yokukhulekela.
Russian-Turkish inqaba amasango
Yiqiniso, wonke umuntu evakashele Krasnodar esifundeni ivame udaka intabamlilo. Ngo Anapa, ngaphezu, zikhona yini ezinye izindawo ezithakazelisayo ezidinga ukunakwa. Omunye wabo - izinsalela inqaba Turkish, elakhiwa ngo-1783 yi-abaseTurkey, ukuze casula Russia. Khona-ke kwaba into enkulu enezindonga ezingaphezu kwezingu-3 km ubude futhi 8 amamitha eliphezulu. Plus emseleni omkhulu palisades emhlabeni. Le nqaba, amabutho bethu impumelelo variable kutheleka izikhathi 6. amasosha amaningi ekhazimulayo babulawa ngaphambi Anapa, futhi kanye nalo, futhi amandla kuze kube phakade yanika eRussia. Manje kusukela ukwakhiwa ukuze inkumbulo inzalo yayimane nje esangweni qwembe othi zingabantu Russian. Phambi kwabo kuba isikhumbuzo kwalowo abanesibindi, nesibindi nomholi wezempi futhi Ungumuntu omangalisayo, AD Ngaphandle Kwegazi, ikakhulukazi owayevelele ngesikhathi bamba lokugcina inqaba.
Vietnam ngo-August ukuthi ukuya zokungcebeleka yezwe? Izici ukuphumula, izincomo kanye nokubuyekeza
Mabhalane - ke ... Igama-lokudlela
Okubhakabhaka okuphekwe ngobisi obilisiwe obilisiwe: izici zokupheka, zokupheka nokubuyekezwa
Idivaysi ekhipha ukunikeza izandla zabo